China Tube otomatiki Labelling System fekitori nevatengesi | Kang Weishi Chiremba Chirevo
Iyo otomatiki tube labeling system inonyanya kushandiswa munzvimbo dzekuunganidza ropa senge wadhi yechipatara, makiriniki ekunze kana bvunzo dzemuviri. Iyo automated yeropa fungidziro yekuunganidza system inosanganisa queiding, hungwaru chubhu kusarudzwa, kunyorera zvinyorwa, kuisa uye kugovera.
Iyo otomatiki tube labeling system inonyanya kushandiswa munzvimbo dzekuunganidza ropa senge wadhi yechipatara, makiriniki ekunze kana bvunzo dzemuviri. Iyo automated yeropa fungidziro yekuunganidza system inosanganisa queiding, hungwaru chubhu kusarudzwa, kunyorera zvinyorwa, kuisa uye kugovera. Iyo system uye chipatara LIS / HIS networking, kuverenga murwere kadhi kurapwa, kuwana otomatiki ruzivo rwomurwere uye zvinhu zvekuongorora, zvinosarudza zvoga maseru ematehwe emarudzi akasiyana uye akanangana, kudhiza ruzivo rwevarwere uye zvinhu zvekuyedza, zvinonamatira matipi bvunzo, kuva nechokwadi chekurapa kurongeka, murwere ruzivo, kuunganidzwa kweropa uye zviri mukati mefungidziro zvakanyatsoenderana uye zvakachengeteka.
Iyo yakangwara yeropa yekuunganidza ropa system ine zvikamu zvina zvinotevera:
Queaching uye kuverenga manhamba system, otomatiki bvunzo tube kunyora system, bvunzo tube inopa system uye otomatiki bvunzo tube yekugadziridza system.
Imwe neimwe subystem ine basa rekuti ishandiswe wega kana musanganiswa. Iyo nzira inonyanya kushandiswa muchipatara nzvimbo dzekunze, nzvimbo dzekuongorora dzezvokurapa nedzimwe nzvimbo dzekuunganidza ropa.
1. Varwere vanoteedzera kuti vafone iyo nhamba.
2. Kushivirira kumirira kufona
3. Mukoti anodaidza murwere kuti aende kuhwindo kunotora ropa kuti rizivikanwe.
4. Iyo yekuyera tube otomatiki yekunyora nyowani system inoziva tube kutora, kudhinda, kufambisa, kuongorora, tube kuburitsa, uye inoshandiswa zvakananga nanamukoti kuunganidza ropa.
5. Mukoti anoisa iyo yakaunganidzwa ropa bhaipi pabhandi rechikepe uye anochinjisa kumuedzo wokupedzisira weodha system.
6. Iyo otomatiki bvunzo tube yekukodha system inogadziriswa zvakatemwa zvichienderana neyakagadziriswa bvunzo bhubhu uye zvobva zvasvitswa kukamuri imwe neimwe yekuongorora.
1. Iyo modular dhizaini sosi mana ehungwaru yekuunganidza ropa system yekudyara, imwe neimwe nzira inogona kuverengerwa kana kushandiswa zvakasiyana.
2. Hwindo rekuunganidza ropa rakashongedzwa neyemukati yekuyera chubhu otomatiki chishandiso, mudziyo wega wega unoshanda pamwe chete, haubati mumwe nemumwe, uye inogona kuwedzerwa sezvinodiwa.
3. Test bvunzo yekugadziridza kumhanya inokurumidza, kune akawanda ekugadzirisa mapoka.
4. Multiple kunyorera marevhizheni ari kumhanya panguva imwechete, uye yekumhanyisa kumhanya kwechimwechete nzvimbo inokurumidza (≤4 masekondi / bazi) kusangana nehuwandu hwekuwedzerwa kweropa zvinodiwa muchipatara.
5. Iyo yekunyora mafaera system haidi kumiswa, uye bhubhu rekuyedza rinogona kuwedzerwa chero nguva.
Yepfuura: OEM / ODM Factory Remi Centrifuge 4 Tubes - Disposable VTM Tube - Kang Weishi
Inotevera: Peni Type Ropa Kuunganidza Tsono
Peni Type Ropa Kuunganidza Tsono